2 Korintofo 8:1-24
8 Afei, anuanom, yɛrema moahu adom a Onyankopɔn de adom Makedonia+ asafo ahorow no, 2 sɛ wɔn ahohia bere mu sɔhwɛ kɛse mu no, wɔn anigye mmoroso ne wɔn hia buruburoo no maa ahonyade a efi wɔn ayamye mu yɛɛ kɛse.+ 3 Na wɔyɛɛ sɛnea wɔn ahoɔden te ankasa,+ yiw, midi adanse sɛ wɔyɛɛ nea ɛboro wɔn ahoɔden so mpo, 4 bere a wɔn ankasa fi wɔn pɛ mu srɛɛ yɛn ara sɛ yɛmma wɔn hokwan na womfi ayamye mu mfa nea wɔwɔ mma na wɔanya ɔsom a wɔsom akronkronfo+ no mu kyɛfa no. 5 Na ɛnyɛ sɛnea na yɛn ani da so kɛkɛ no, na mmom wɔnam Onyankopɔn pɛ so dii kan de wɔn ho maa Awurade+ ne yɛn. 6 Eyi ma yɛsrɛɛ Tito+ sɛ, sɛnea ofii ase mo mu no, ɔnhwɛ mma munwie ɔma a efi ayamye mu saa no. 7 Nanso sɛnea moboro so ade nyinaa mu,+ gyidi ne kasa ne nimdeɛ+ ne mmɔdenbɔ nyinaa ne ɔdɔ a yɛdɔ mo yi mu no, mommoro so saa ara wɔ ɔma a efi ayamye mu yi mu. 8 Ɛnyɛ sɛ mereka eyi de ahyɛ mo,+ na mmom mmɔden a afoforo abɔ wɔ ho ne sɛnea ɛbɛyɛ a mehu sɛ mo dɔ di mũ ntia. 9 Na munim yɛn Awurade Yesu Kristo adom no, sɛ na ɔyɛ ɔdefo de, nanso mo nti ɔbɛyɛɛ ohiani,+ na monam ne hia so ayɛ adefo.+ 10 M’adwene+ wɔ eyi ho ne sɛ: asɛm yi so wɔ mfaso ma mo,+ efisɛ afe ni a mufii ase sɛ mobɛyɛ, na ɛnyɛ ne yɛ nko, na mmom ɔpɛ a munyae sɛ mobɛyɛ nso;+ 11 enti afei munwie ne yɛ nso, na ama sɛnea munyaa ɔpɛ sɛ mobɛyɛ no, moafi nea mowɔ mu awie no saa ara. 12 Na sɛ ɔpɛ no wɔ hɔ a, nea obi wɔ na ɛsɔ ani,+ na ɛnyɛ nea onni. 13 Na ɛnyɛ sɛ mepɛ sɛ ɛyɛ mmerɛw ma ebinom+ na ɛyɛ den ma mo; 14 na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma bɛkyɛ pɛ ama nea aboro mo so no akogu wɔn hia mu, na nea aboro wɔn so no nso abegu mo hia mu, na nneɛma akyɛ pɛ.+ 15 Saa na wɔakyerɛw sɛ: “Nea ɔwɔ pii no annya ammoro so, na nea ɔwɔ ketewaa bi no, anhia no ammoro so.”+ 16 Afei aseda nka Onyankopɔn sɛ ɔde mo ho mmɔdenbɔ koro no ara bi ahyɛ Tito+ komam, 17 efisɛ watie yɛn nkuranhyɛ no ampa, nanso esiane sɛ ne ho pere no kɛse nti ofi n’ankasa pɛ mu na ɔreba mo nkyɛn. 18 Na yɛresoma onua a asɛmpa no ho ayeyi a ɔwɔ atrɛw adu asafo horow nyinaa mu no aka ne ho. 19 Ɛnyɛ ɛno nko, na mmom asafo horow no ayi no+ sɛ ɔnka yɛn ho mfa akyɛde yi nkɔ mmeaemmeae mfa nhyɛ Awurade anuonyam+ mfa nkyerɛ sɛ yɛayɛ krado.+ 20 Yɛnam so kwati sɛ yɛbɛma obi anya yɛn ho asɛm+ wɔ ntoboa+ a wɔde ma ayamye mu a yɛde kɔboa yi ho. 21 Na yɛyɛ “nhyehyɛe di ho dwuma nokwaredi mu, ɛnyɛ Yehowa anim nko na mmom nnipa anim nso.”+ 22 Bio nso yɛresoma yɛn nua a yɛada no adi wɔ nneɛma pii mu sɛ ɔyɛ mmɔdenbɔfo aka wɔn ho, na seesei mo mu ahotoso kɛse a ɔwɔ nti, ne mmɔdenbɔ no ayɛ kɛse. 23 Nanso sɛ biribi wɔ hɔ a monte ase a ɛfa Tito ho a, ɔyɛ obi a ɔka me ho ne me yɔnko dwumayɛni+ ma mo yiyedi; anaa sɛ ɛyɛ biribi a ɛfa yɛn nuanom no ho a, wɔyɛ asafo horow no asomafo ne Kristo anuonyam. 24 Enti monna mo dɔ+ ne nea yɛde hoahoaa yɛn ho+ wɔ mo ho no adi nkyerɛ wɔn, asafo ahorow no anim.